Lix walaalo ah iyo Libaaxyadooda oo magaalo dhan argagax galiyay | Xaysimo
Home War Lix walaalo ah iyo Libaaxyadooda oo magaalo dhan argagax galiyay
Qaar ka mid ah meydadka waxay u muuqdaan dagaalyahanno dhalinyaro ah oo ku dhintay isku dhacyadii xagaagii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Tarhuna, markaasoo dagaalka sokeeye ee Liibiya ka socda uu marayay sanadkii sagaalaad.
Qoraalka sawirka,Wadah al-Keesh oo lagu sawiray qabuurihii uu qaarkood wax ka qufay
Qoyska Kani waxay ka mid ahaayeen dadka tirada yar ee taageersanaa kacdoonka looga soo horjeeday Qadaafi – inkastoo ujeeddada ay lahaayeen aysan ku saabsaneyn fikir balse ay salka ku heystay cadaawad kala dhaxeysay qoys ilma-adeerradood ah oo ay ilaa 30 sano col ahaayeen, kuwaasoo taageersanaa Qadaafi, sida uu sheegay Hamza Dila’ab.
Qoraalka sawirka,Boor lagu xusayo Ali al-Kani
Qoyska reer Kani waxay si tartiib tartiib ah ugu dambeyn ula wareegeen maamulka magaalada, waxayna halkaas abuureen ciidamo awood leh oo ilaa hadda jira, maleyshiyaadkooda u gaarka ahna waxay tiradooda gaarsiiyeen ilaa hal kun oo dagaallame. Sida maleyshiyaatka kale ee ka dhisan dalka Liibiya, waxay helayeen dhaqaalaha dowladda. Markii ay walaalkood u aar gudeenna, raggii kale waxay go’aansadeen in ay magaalada Tarhuna oo dhan maamulkeeda hoostooda keenaan.
Qoraalka sawirka,Hanan Abu-Kleish oo gacanta ku heysa sawirka mid ka mid ah adeerradeed oo la la’yahay
Qoraalka sawirka,Mohammed al-Kani (bidix), iyo labada kale ee dilalka ugu badan geystay, Mohsen iyo Abdul-Rahim
Qoraalka sawirka,Dhulka guud ahaan magaalada Tarhuna iyo nawaaxigeeda waxaa ka baxa geedaha saliidda dhaliya
Qoraalka sawirka,Ciidamada daacadda u ah dowladda GNA oo madaafiic ku tuuraya magaalada Tarhuna bishii April 2020
“Qoyskeenna Jaballah, waxaan nolosheenna ku daberaan ganacsiga gawaarida, gaar ahaan kuwa awoodda leh ee afarta taayar xoogga ku leh. Sidaas darteed waxay noo soo waarareen si ay nooga helaan gawaari ay dagaalkooda u isticmaalaan.”
Subaxdii dambe, iyada iyo dad kale oo xubno ka mid ah qoysaskooda ay maqanaayeen ayaa ku kala cararay xaruntii ay reer Gani xabsiga ka dhigteen ee ay dadka ku heysan jireen. Laakiin waxaa naxdin ku noqotay in ay arkeen qolal xabsi ahaan loo dhisay oo cabirkoodu yahay 70cm oo xitaa uusan qofka fariisan karin.
Qoraalka sawirka,Sawirka Mohsen, oo la halleeyay oo ku dhaggan xarunta xabsiga u ahayd Kani. Wuxuu ahaa wasiirkii Gaashaandhigga ee maamulka walaalaha
Qoraalka sawirka,Mid ka mid ah meydadkii qabuuraha laga soo qufay oo aas sax ah loo sameeyay 13 November 2020
Laakiin maadaama ay ku jiraan maganta Khaliifa Xaftar isaga iyo walaalihiisa noolba way adag tahay si ay caddaalad ku wajahaan.
Qoraalka sawirka,Bar koontarool oo ay ciidamada dowladda GNA ka sameysteen magaalada Tarhuna